Giraantu Markii uu booqday jardiinooyin ubax ah riyadeedii, Tippy wuxuu ku yimid rajo wanaagsan oo ay hareereeyaan ubaxyo. Halkaas, waxay eegtay ceelka waxayna aragtay milicsiga xiddigaha habeenka, oo waxay sameysay rajo. Xiddigaha habeenkii waxaa matalaya dheemanka, iyo ruby waxay astaan u tahay hamigeeda qotada dheer, riyooyinkeeda, iyo rajada ay ka qabtay hamiga. Naqshadani waxay ka kooban tahay caado ubax goynaysa, hexagon ruby claw set in 14K dahab adag. Caleemaha yaryar waxaa loo xardhay si ay u muujiyaan dhirirka caleemaha dabiiciga ah. Qaybta giraan garabka ahi waxay taageertaa dusha sare ee fidsan, waxyarna u rogaa gudaha gudaha. Cabbirka giraan waa in lagu xisaabiyaa.
Bacda Kubado Naqshaddeeda toosan ee loo yaqaan 'Topographic design' bac tote, si loogu adeego sida rarka oo fududaan, gaar ahaan maalmahaas mashquulka ah waxay ku bixi jireen adeegsiga ama socodsiinta howlaha. Awooda bacda Toteku waa sida buur oo waxay qaban karaan ama qaadi karaan waxyaabo badan. Lafta oracle waa qaabdhismeedka guud ee bacda, khariidadda qaab dhismeedku waxay noqoneysaa inay noqoto wax dusha sare ah sida dusha sare oo aan sinnayn.
Pendant Taq Kasra, oo macnaheedu yahay kasra arch, waa xuska Boqortooyada Sasani ee hadda ku sugan Ciraaq. Muusigani waxa uu dhiirrigeliyay joomatariiga Taq kasra iyo weyneynta madax-bannaanidii hore ee ku jirtay qaab-dhismeedkooda iyo mawduucyadooda, waxaa loo isticmaalay qaabkan qaab dhismeedka in lagu sameeyo ethos. Sifada ugu muhiimsan waa naqshad casri ah oo ka dhigtay go 'leh aragti gooni ah sidaa darteed sameynta aragtida dhinaca waxay u egtahay dalool waxayna keentaa mawduuc muuqaal ah waxayna sameysay muuqaalka hore ee ay sameysay meel bannaan.
Uruurinta Haweenka Ururintaan, Yina Hwang waxaa inta badan dhiirigeliyay qaabab leh sumad iyo astaamo leh taabashada dhaqanka muusikada dhulka hoostiisa. Waxay xustay aruurintaan iyada oo ku saleysan waqtigeedii muhiimka ahaa ee isdabamarinta si ay u abuurto aruurinta dharyo iyo qalabyo shaqeynaya oo wali shaqeynaya si ay u soo jiidato sheekada qibradeeda. Daabacad kasta iyo dharkasta oo kujira mashruucan waa asal waxaana inta badan loo isticmaalaa maqaar PU, Satin, Power Mash, iyo Spandex salka dharka.
Giraantu Bacda Kubado Pendant Uruurinta Haweenka Silsilad Iyo Dhegaha Dhegaha Dhar Daabacan